Iyo yakajeka kristal acrylic girazi yakakwirira pamusuwo China Manufacturer
Tsanangudzo:High Speed ​​Rolling Up Door,Transparent Industrial Door,Full Vision Garage Door
Home > Products > High Speed ​​Door > Aluminium Spiral High Speed ​​Door > Iyo yakajeka kristal acrylic girazi yakakwirira pamusuwo
Iyo yakajeka kristal acrylic girazi yakakwirira pamusuwo
Nokuda kwemamiriro okunze ekuchengetedza nzvimbo yechipfuva chemukati yepakati ine sangano rinopindirana rakaita sendivi rinosanganisira yakakwirira yehuni mucherechedzo wakazara wepaneti. Mucheto wechipfuwo chemukova wechipfuva chakanyanya kushandiswa pakuteerera nzvimbo pamarudzi ese emagetsi uye zvakagadzirirwa nechepamusoro pepamusoro, izvozvi vertical-opening sectional door can be installed in areas with reduced head chamber. Zvinopa kupisa uye kupinza kwepachivande pamwe chete nekwakadzika kwemajeri ekugadzira.
Kuwirirana kune zvitubu zvakasungirirwa pane shari resimbi iyo yakakwirira yehelical helical wound iron. Izvo zvave zvichiitwa kupisa kunotarisirwa kuti zvigadziridzwe kushandiswa kweanenge ma 50 000 maitiro.
Uchishandisa ultra-high-speed operation uye yakasiyana-siyana teknolojia yekushandisa, Spiral FV inokurumidza uye yakanyanya kunyarara. Pamusoro-kusvika-pasi, full-width window slats inopa kumwe kuchengetedzwa uye kutaridzika kwepamusoro-soro kunokurudzira mufananidzo unogoneka wekucheka-makumbo.
Panzvimbo dzose dzinofambidzana dzinoenda kune dzimwe mbiri, maonero akajeka kuburikidza nemukova anopa mazano anobatsira: Njodzi dzinodzivirirwa uye kushambadzira kwakanyatsogadziriswa kunovimbiswa.
Mashizha emukova weHifa anochengetwa pane imwe nzvimbo mumhepo. Kuvonga kushamwaridzana-kuderera-kutsika, laths dzisina kujeka dzinopa maonero akanaka kuburikidza nemusuo wemakore akawanda-uye pasina kunyanya kupfeka. Nokudaro, musuo wose unogutsikana nekutarisa kwakakwana, kunyange pasi pekuoma kwemazuva ose ekushanda.
Aluminium Alloy Spiral High Speed ​​Door Bata Ikozvino
Aluminium Aloy Turbine High Speed ​​Door Bata Ikozvino
High Speed ​​Rolling Up Door Transparent Industrial Door Full Vision Garage Door High Speed ​​Rolling Up Doors High Speed ​​Rolling Door High Speed ​​Rolling Repaid Door Pvc High Speed ​​Rolling Door Crystal High Speed ​​Rolling Up Door